एसटी Zirconia ब्लक निर्माताहरु - चीन एसटी Zirconia ब्लक कारखाना र आपूर्तिकर्ता
Cad क्याम ST Zirconia ब्लक 98mm Yucera दन्त ल्याब सामग्री र उपकरण दन्त
1. राम्रो biocompatibility। यो कुनै जलन, मसूडा को लागी कुनै एलर्जी प्रतिक्रिया छैन, र गम को कुनै कालो रेखा बनाईएको छ। यो मौखिक गुहा को लागी धेरै उपयुक्त छ र एलर्जी, जलन, जंग र मौखिक गुहा मा परम्परागत धातु चीनी मिट्टी के बरतन दाँत को कारण अन्य अप्रिय उत्तेजनाहरु लाई बचाउँछ।
2. दाँत शरीर उच्च शक्ति र कठोरता छ। टूटने को लागी अद्वितीय प्रतिरोध र भत्कने पछि बलियो उपचार गुण दाँत बलियो बनाउँछ।
YUCERA गलत दाँत सामग्री दन्त प्रयोगशाला सीएडी सीएएम प्रणाली दन्त सुपर पारदर्शी Zirconia ब्लक को लागी
सुपर पारदर्शी वा prettau संगत zirconia पूर्ण समोच्च मुकुट र पुल को लागी हो
सामान्य प्रतिलिपि र पुल को लागी उच्च पारदर्शी
अल्ट्रा पारदर्शी पूर्वकाल को लागी